English For Students - Wall Street English
နိုင်ငံတကာမှာအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်ခြင်းဟာ သင့်ဘဝရဲ့ကဏ္ဍများစွာကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် တက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ အသိမိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားနိုင်ခြင်းကစလို့ အလုပ်ခွင်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းအထိပါ။ Wall Street English မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျူရှင်နည်းစနစ်တွေဟာ လူသန်းပေါင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
သင်နဲ့ကိုက်ညီအောင် စီမံထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာသင်တန်း
သင့်ဘဝနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် စီမံဖန်တီးထားတဲ့ စွဲငြိစေမယ့် လေ့လာသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို ကျွန်တော်တို့ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီးတော့ အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အဂၤလိပ္စကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုသူတွေ ဦးဆောင်တဲ့ သင်တန်းတွေကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုသာပြောဆိုပြီး သင့်ကို လေ့ကျင့်ဖို့အခွင့်အရေးတွေ အမြင့်ဆုံးပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းအရွယ်သေးငယ်ခြင်းနဲ့ လူမှုရေးပွဲအခမ်းအနားတွေ မကြာခဏကျင်းပခြင်းတို့ဟာ လေ့လာသင်ယူဖို့နဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေရရှိဖို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဂၤလိပ္စာကျွမ်းကျင်မှုကို သက်သေပြဖို့ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် တွေကို ရယူလိုက်ပါ
We prepare you to succeed in achieving internationally recognized English qualifications including IELTS and TOEFL. Invest in your future.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေဟာ ရာနှုန်းပြည့် အဂၤလိပ္စကားပြောပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်ပြီး သင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အတန်းချင်း နီးစပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပွဲလမ်းတွေနဲ့ လမ်းကြုံဝင်ပြီး လေ့လာသင်ယူလို့ရတဲ့ ဖော်ရွေလှိုက်လှဲတဲ့နေရာတွေကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လေ့လာသင်ယူရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ စိတ်နေစိတ်ထားချင်းတူညီတဲ့ သင်ယူသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ပါမယ်။ သွားရလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာတွေမှာ တည်ရှိတာကြောင့် သင်ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာကို ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာ လွတ်လပ်စွာ သွားရောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလာဖို့အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် အတန်းကို ရှာဖွေပါ​